ဂျွန်ဆင် 10 HP က Seahorse Tune-Up ကိုစီမံကိန်း | ပဲ့ချိတ်လှေမော်တော်ပြုပြင်ခြင်း
ဂျွန်ဆင် 10 HP က Seahorse Tune-Up ကိုစီမံကိန်း
သငျသညျယခုသင့် Facebook အကောင့်နှင့်အတူဝငျရောကျနိုငျသညျ။
ကတင်ပြ Matt 06: 06 - Thu, 2019 / 20 / 05 အပေါ်
အမှတ်ကွာဟမှုများနှင့် flywheel setting များအတွက် magneto ပန်းကန်အမှတ်အသားများ
အဟောင်းကိုပဲ့ချိတ်အပေါ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်ညွှန်ကြားချက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဖန်တီးရန်အချိန်ယူပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါမှတ် setting အဘို့သင့်နည်းလမ်းကိုအောက်ပါတစ် 1958 ဂျွန်ဆင် 10hp အပေါ်အချက်များ, ကွိုင်နှင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့အစားထိုးခဲ့ကြသည်။ ငါ .20 မှပွင့်လင်းအချက်များနှင့်အတူထိပ်တန်းအမှတ်အသားမှာ cam နေရာ, ပြီးတော့အဓိကသော့ချက်နှင့်အတူ aligned, ပေါ် flywheel ချော်လျှင်, ငါအချက်များသတ်မှတ်ထားဖို့သုံးပါမည်ဟုသော flywheel ပေါ်တွင်အမှတ်အသားဟာ magneto ပန်းကန်ပေါ်နှစ်ခုအမှတ်အသားများအနီးမျှရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ ငါ (အစားထိုး plug ကိုဝါယာကြိုးများ) ကို magneto ပန်းကန်ကိုချွတ်ယူခဲ့ပါနဲ့ re-install လုပ်ထားကြပါပြီ, ထိုပန်းကန်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအောက်ပါအပေါ်ပြန်လွဲချော်သွားတာခံရဖို့ရှိသည်သနည်း? ဒါမှမဟုတ်အထူးသဖြင့်အမှတ်အသားနှင့်အတူ aligned?
ကတင်ပြ ttravis 06: 06 - Thu, 2019 / 23 / 02 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ အမှတ်ကွာဟမှုများနှင့် flywheel setting များအတွက် magneto ပန်းကန်အမှတ်အသားများ by Matt
magneto ပန်းကန်အမှတ်အသားများ ......
ကျွန်မအပေါ် magneto ပန်းကန်ထားရန်တစ်ဦးတည်းသာလမ်းလည်းမရှိထင်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမညှိနှိုင်းမှုရှိပါသည်။
ငါစက်နှိုးစနစ်အဘို့ထိုသို့ပြုနှစ်ခု writeups ရှိပါတယ်။ ငါအဘို့အဦးတည်းကိုပြု၏ 3.0 Evinrude နှင့်အခြား 5.5 ဂျွန်ဆင်။ ငါကွဲပြားခြားနားသောအချိန်များတွင်သူတို့အားတက်ရေးသားခဲ့သည်, သူတို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားဖြည့်စွတ်, ဒါကြောင့်ငါသင်သည်ထိုသူတို့နှစ်ဦးစလုံးကိုဖတ်ရှုဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ဤအနှင့်သင့် moter အပေါင်းတို့၏နှစ်ဦးစလုံးတူညီသောစက်နှိုးစနစ်အားရှိသည်။ ငါ 5.5 သင့်ရဲ့မှတ်ရှင်းပြ၏ပိုကောင်းတဲ့အလုပ်အကိုင်အမထင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ၌ငါသင်ကဖွင့်အချက်များအဖြစ်အမှတ်အသားများအကြားဗဟိုဖြစ်စေခြင်းငှါအနိုင်အထက်အမှတ်ကွာဟချက်ကိုထိန်းညှိရန်ရှိသည်စေခြင်းငှါရှင်းပြပါ။ သင်တစ်ဦးဟာ 2nd ဆလင်ဒါအဘို့သင့် flywheel အပေါ် marking ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်, သင်အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းသို့မဟုတ် 180 ဒီဂရီအပေါ်တစ်ဦး sharpie နှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လုပ်ရပေမည်။ အဆိုပါ stator အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်တစ်ဦးတည်းသာအမှတ်အသားရှိပါသည်။
ငါသည်သင်တို့မရောထွေးခဲ့ဘူးမျှော်လင့်ပါတယ်။ သင်ဆဲအကူအညီလိုလျှင်, ငါငါဖြစ်၏ထက်အချို့သောပိုကောင်းကျွမ်းကျင်သူများကရန်သင့်အားညွှန်ပြနိုင်ပါ။
ကတင်ပြ Matt 06: 07 - Fri, 2019 / 19 / 34 အပေါ်
ယင်းဖြေကြားချက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ ...
ယင်းဖြေကြားချက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာဖို့ချိတ်ဆက်မှု armature ပန်းကန်များအတွက်တစ်ဦးတည်းသာအနေအထားရှိ၏ကြောင်းသံသယရှိ။ နှစ်ဦးစလုံးဥပမာ (3.0 နှင့် 5.5) ခုနှစ်တွင်, သင်က "flywheel ပေါ်တွင်အချိန်ကိုက်အမှတ်အသားဟာ armature ပန်းကန်ပေါ်နှစ်ခုအမှတ်အသားများအကြားဖြစ်တဲ့အခါ, အချက်များကိုဖွင့်သင့်တယ်နှင့်အုမ်းမီတာအဆုံးမဲ့ ohms မှ0ကနေပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ " ဖော်ပြ အချိန်ကိုက်အမှတ်အသားဒီအနေအထား၌တည်ရှိ၏သောအခါ, မီတာသုညဖတ်တယ်။ ငါ (ဂရုတစိုက်) ကို flywheel ချွတ်ဆွဲထုတ်လျှင်, cam အပေါ်ရမှတ်၏ဖိနပ်မြင့်အမှတ်အနီးမဟုတ်ဘူး "ဟုထိပ်တန်း" ဟုမှတ်သားခဲ့သည်။ ငါ armature ပန်းကန်ရွှေ့ဖို့အပြည့်အဝပေးရန်အခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာကိုဖွင့်လျှင်, ငါကအနီးကပ်ထိပ်တန်းအပေါ် Top ပေမယ့်မရနိုင်။
ကတင်ပြ ttravis 06: 08 - Sat, 2019 / 11 / 10 အပေါ်
မှပြန်ကြားချက်ထဲမှာ ယင်းဖြေကြားချက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါ ... by Matt